Igumbi elimnandi eliphindwe kabini kumbindi weChalkida
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguDimitra
Igumbi lethu lokulala elipholileyo nelixhotyiswe ngokupheleleyo libekwe kanye kumbindi wesixeko iChalkida apho zonke iindawo zokutyela / iivenkile / iikhefi zikhoyo kwaye kukuhamba imizuzu eli-10 kuphela ukusuka elunxwemeni. Kukho amanye amagumbi amabini kule flethi, anokuhlala okanye angahlali ngexesha lokuhlala komntu.
Nceda ungalibazisi ukunxibelelana nam ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Ukuba indlu ayifumaneki nceda ujonge olunye uluhlu lwethu:
Igumbi lokulala elimnandi eline-tv kunye ne-aircondition
4.77 · Izimvo eziyi-146
Ndicinga ukuba indlu ibekwe kanye embindini wedolophu ayikho kwindlela enkulu. Ngenxa yoko, ubumelwane buzolile kakhulu kwaye akukho zithuthi.
Make your trip to Greece unforgettable by booking your stay in one of the most vibrant Greek cities, Chalkida. Combining proximity to Athens and easy access to the most beautiful b…
Ndizakubakho kuluhlu ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ndiyakwazi ukujongana nayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo kwaye ndingakunika iingcebiso ngeendawo onokundwendwela kuzo, umkhomba-ndlela oya kwezona ndawo zinomtsalane/iilwandle ezikufutshane kunye neendawo zokutyela ezilungileyo edolophini.
Ndizakubakho kuluhlu ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ndiyakwazi ukujongana nayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo kwaye ndingakunika iingcebiso ngeendawo onokundwendwela kuzo, umkhom…
Inombolo yomthetho: 00000043731
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chalkida